ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): ဟန်ချက်
ဘလော့ ပြန်ရေးဖြစ်တဲ့ ပထဆုံးနေ့မှာ ရင်ခုန်သလို၊ ဘာလိုလို ဖြစ်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ရီချင်သား။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပစ်ထားမိတဲ့ ဘလော့ရဲ့ အစွမ်းက ခုချိန်ထိ ညှို့အားပြင်းနေဆဲ ဆိုတာ ကျွန်မ ဒီနေ့မှ သိလိုက်ရတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ လူမှုဘ၀ထဲမှာ ဟန်ချက် ပျောက်သွားရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ အများကြီး ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စ အသေးအဖွဲလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ စည်း၊ ဘောင်ကို ကျော်ပြီး အစွန်းရောက် သွားခဲ့ရင် ရလာဒ်က ကိုယ်မျှော်လင့်ထား သိလို မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်တတ်နိုင်တာထက် ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တာရဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခထက် ကျော်သွားတယ်၊ မနိုင်တဲ့ ၀န်ကိုထမ်းဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုရင် ကိုယ်ထင်သလောက် မျှော်လင့်သလောက် ခရီး မတွင်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို သာသိထားမယ်ဆို ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချတဲ့အချိန်ကျရင် အမှားအနည်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ပေးနိုင်တယ်။ အစွန်းရောက် အတွေးအခေါ်နဲ့ အယူအဆတွေကိုသာ တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်နိုင်မယ်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ဟန်ချက် မပျက်ဘူးဆိုရင် လောကကြီးက အစွန်းရောက်ခြင်းရဲ့ စွက်ဖက်မှု ကင်းလို့ တစ်မျိုးလှနေမယ် ထင်ပါရဲ့။
ဟန်ချက် အကြောင်းကို တစ်သွင်သွင် ပြောနေပေမယ့် ဟန်ချက် ရှာဖို့က ဒီလောက်ပဲ လွယ်ကူသလား? တကယ်တော့ အပြောလွယ်ပြီး အလုပ်ခက်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းခြင်း ဆိုတာ ဘယ်အရာကိုမှ လွန်ကွဲစွာ မတပ်မက်၊ မခုံမင်ဘဲ အကောင်း၊ အဆိုး အားလုံး အတွက် တစ်နေ့မှာ နိဂုံး တစ်ခုစီ ရှိတယ်ဆိုတာ သိထားမယ်၊ လက်ခံထားနိုင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေရဲ့ လှပတဲ့ အဖြေတစ်ခုပါ။ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရိုးရိုးလေး လက်ခံနိုင်ဖို့ ဆိုတာ ခက်နေပြန်ရော။ လိုချင်မှု နဲ့ လိုအပ်မှု ကိုမသိဘဲ ရောထွေး နှောင်ဖွဲ့ ခံနေရမယ်ဆိုရင် သံသရာလည်ပြီးရင်း လည်နေရင်းနဲ့ ဟန်ချက် ဆိုတာ ဟိုးဝေးသထက် ဝေးတဲ့နေရာမှာ လက်လှမ်းမှီနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ အဆက်ပြတ်သွားခဲ့ရင် ကျွန်မတို့ တကယ် လိုချင်တာဟာေ၀၀ါးပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ နားမလည်ခြင်း များစွာထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ရင်း နောက်ဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ဒီလိုဆို အနာဂတ်တွေလဲေ၀၀ါးလာမယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်လဲ မပြတ်သားတော့ဘူး၊ အတွေးတွေလဲ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာမယ်၊ လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာလဲ မကွဲပြားတော့ဘူး။ ဟန်ချက်ညီတဲ့ ဘ၀ရဲ့ သော့ချက်က ဟန်ချက် ရှာတတ်ဖို့ပဲ။ ကဲ…………..ဘယ်လိုရှာကြမလဲ?
Posted by Chaos at Tuesday, September 25, 2012